Fikradaha naqshadeynta lafaha ee ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
Fikradda naqshadda sawirrada ee ragga iyo dumarka
1. Qurxinta gacanta oo leh Naaso buluug ah oo muujinaya aqoonsigiisa dhabta ah
Nin wuxuu hadda la soo bixi karaa aqoonsi cusub oo leh burcad buluug ah.
2. Bandhig cajiib ah oo sawir gacmeedyo ah oo lagu qabtay meel u dhow wadnaha
Hada, samee magacaaga magaciisa oo leh habdhaqan fiican # Habka tattookska ah.
3. Tattoo oo si cajiib leh loo dhigo si uu u soo jiito qof kasta oo ka soo horjeeda
U qurxin si aad u eegto qaniinyada caanaha ah ee ku caan baxa qoortaada.
4. Tattoo cirridka oo lagu sharraxay garbaha ayaa soo bandhigaya dharka adag
Xilli ciyaareedkan, ku labisan dharka jilbaha boodboodka garabkaaga.
5. Farshaxan soo jiidasho leh oo loogu talagalay isku dhafan midab leh
Isku darka midabkani wuxuu kaa dhigayaa jacaylka dhabta ah ee dabeecada cagaaran.
6. Dhaqdhaqaaqyo aad u kulul oo qumman oo qumman oo muujinaya awoodda dhabta ah
Tattoo qurxoon ee quruxda badani waa isbeddelka maanta.
7. Abuur abuurista riwaayadaha, hubaal ku filan in qof walba uu waalan yahay
Kaga dhaji naftaada tattoo jacaylka ah oo noqo xarun soo jiidasho leh.
8. Caleemaha buluuga ah wuxuu kaa tagaa qoraalo kala duwan iyo qoraalka qaabka
Hadda, taasi waxaan ku magacaabnaa calaamad wanaagsan oo hal-abuur leh.
9. Caleemaha buluuga ah ee aad adigu u leedahay si aad uga dhigto mid raaxo leh
Waa tattoo qaali ah oo qumman oo soo jiidasho leh.
10. Abuuri cabsi dadka kale ee leh qashinka Tattoo ee Sigaarka
Dumarka oo dhan, xiro tattoo sigaar cabbista ah oo muujiya muuqaalkaaga.
11. Qalab gaaban oo saafi ah si aad u muujiso dabeecaddaada runta ah
Hadda, waxaad ku raaxeysan kartaa inaad xirtaan Pisces buluug xitaa qaab foomka gaaban.
12. Naqshad jilicsan si aad u qabato dabeecaddaada adag ee nolosha
Hadda, muujiya dabeecadaada adag ee nolosha adigoo xiranaya labadan miisaan oo qadarin leh.
13. Furdooyinka mugdiga ah si ay u sahamiyaan dareenkaaga maskaxda iyo dabeecadda
Nin maskaxdiisu si qurux badan u sharraxan tahay tattoo baaluqan ayaa lagu duubay mugdiga.
14. Ku dhuujiso xisbiyada adag ee leh aduunkani waa mid cajiib ah oo qurux badan
Ku dhuujiso xisbiyada adag ee leh aduunkani waa mid cajiib ah oo qurux badan
15. Tartanka halista ah ee kelida ah ee quruxda badan ee qofka xiran
Hada, sahaminta cusub adiga adoo xiraya qeybtan cajiibka ah ee Rabshadaha.
16. Kalluumeysiga buluuga ah wuxuu kaa dhigayaa marxalad ka duwan kuwa kale
Hadda, sii hor joog iyo meel bannaan oo adoo xiraya baalasha buluuga ah.
17. Ku qurxin cagahaaga sida tiyaarka filimka oo kale ah
Kaliya ka fogow dadka kale oo muuji jimicsigaaga cusub ee Tattoo ee cagahaaga.
18. Qaado lixda baako ee lagu qurxiyey iskudarka saxda ah ee Rabshadaha
Nin wuxuu jecelyahay in uu jidhkiisa baaro jimicsi sida jilicsan ee Tattoo Pitces.
19. Qaado farsamooyinka xooggan ee leh calaamada madow ee baaskiilada
Hada, ku raaxeyso calaamada madow ee tattoo jilicsan oo awoodda ku leh.
20. Calaamad aad u qoto dheer laakiin soo jiidasho leh oo ka mid ah goobtii xooggan ee Pisces
Tani waa joornaalka ugu dambeeyay ee ku yaal goobta ugu fiican.
21. Kala duwanaansho midab leh oo muujinaysa xoogga qofka ayaa fuliyay
Hadda, muujiyaan xooggaaga leh isku-dhafan midab leh ee Tattoo Rabshadaha
22. Sneak-peek ah ee adduunka ee Sayniska leh midabada cajiib ah
Ku qurxin cagahaaga gaaban # naqshadeynta tattoo yaryar.
23. Mucaawin ballaaran ee Noocyada loogu talagalay qof loogu talogalay
Wiilasha taxadar leh! Kuwa qaadaya muruqyada waawayn waxay xaqiiqdii jecel yihiin naqshadeynta.
24. U sheeg aqoonsigaada muuqaalka midabka leh ee bambo-gacmeedka
Hadda, u sheeg qofkasta oo aad la joogtid taatikada quruxda badan ee loogu talagalay.
waxay jecel yihiin tattoostattoos sleeveshaatiinka shiidansawirrada raggatattoos eagleshimbir shimbirmuusikada muusikadatattoostattoo dheemanlaabto laabtaJoomatari Tattooskoi kalluunkatattoos moontattoo ah octopusjimicsiga bisadahacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos ubaxhenna tattooDhaqdhaqaaqalibto libaaxtattoos saaxiib saxa ahgadaal u laaboarrow Tattootattoos qosol lehgaraacista gacmahatattoo biyo ahtattoo maroodigataraagada kubbaddatattoos gacantanaqshadeynta mehndilammaanahawaxaa la dhajiyay tattoosTattoos WadnahaTilmaamta jaalaha ahTartoo ubax badanfikradaha tattootattoo indhahatattoos taajkiisawir gacmeedtattoos qabaa'ilkatattoos qoortatattoos qorraxdaTattoo infinitysawirada gabdhahatattoos iskutallaabtatattoos cagtaTattoo Feathersawirada malaa'igtaku dhaji tattoostattoo tilmaan